Oil nokulujiyisa System ne Best High-Quanlity Products - China NIutech Environment
Oil nokulujiyisa System ne Best High-Quanlity Products
inkqubo Oil ulwelo
1. Inkqubo yokufundisa Technical
Emva ngokwaneleyo ubushushu kunye nemveliso evela kumgca osecaleni neyanamhlanje inqaba, oli ekrwada bungena ezikweni kwaye ngumsindo kwiqondo lobushushu ezifunekayo. I-oli ekrwada emva shushu kwi neziko ikhutshelwa kwinqaba neyanamhlanje ukuba neyanamhlanje, kobubi fter, igesi non-ukutsha unako efika kwi phezulu inqaba, ipetroli iqhezu kwi-1 st umgca esesibhakabhakeni, nawedizili iqhezu ukukhanya 2 nd esesibhakabhakeni line, enzima idizili iqhezu kwi-3 rd umgca neoli enzima emazantsi inqaba. Umxholo wax ioli zeplastiki olukrwada eliphezulu; ioli seplastiki ekrwada ungena reactor ukhuko emiselweyo zokuphosa inkqubo de-isagcwele emva ubushushu nokwanana ngokusebenzisa eziko, uze ke uthi idluliselwa nenqaba neyanamhlanje ngenxa neyanamhlanje, enikezela ngemveliso ngamnye umgca osecaleni iya got. Igesi Non-ukutsha yaziswa ezikweni ukuba evutha uhlobo yesibaso. Ipetroli nedizili amaqhezu rhoqo idluliselwa kwinkqubo oyile lwe alpha for kwealkali ukuhlamba wokucokisa ze alpha ukufumana ipetroli enezinto nedizili leyo ukuhlangabezana neemfuneko emarikeni. I-oyile enzima apha ezantsi inqaba idluliselwa itanki oil amafutha enzima kubonelela kukudla iziko kunye kwibhoyila ulophu; ioli enzima waphumla ziya enziwe ngokwemfuneko zeemarike uze uthengiswe oil amafutha.
2. Equipment siseko kunye Main Equipment
Iyunithi oyile neyanamhlanje yahlulwe ngokupheleleyo zibe kwiinkqubo 8 njengokuba zilandelayo: Inkqubo kwibhoyila Steam inkqubo oli ekrwada Yonke inkqubo line oyile osecaleni Non-ukutsha inkqubo inkqubo inkqubo negesi Amanzi okupholisa ucinezelo Oli alpha system system Control
3. Iimpawu kunye nedlela
1. It ungaziphumeza inkqubo eqhubekayo, wokuxuba kunye yokucokisa yeoli ekrwada, kwandiswe inkqubo amandla iseti epheleleyo izixhobo, ukunciphisa ixesha lokuvelisa kunye nokwandisa umgangatho neziphumo, kweli xesha, ubuchule yemveliso ingeniso lwamashishini ziya kuphuculwa kakhulu. 2. igesi Non-ukutsha yaziswa ezikweni kutshiswa njenge amafutha, okuyinto kunciphisa ungcoliseko ukukhutshwa kuphela kwaye konga amandla kwakunye zehlisa iindleko. 3. iingenelo ezintathu ezingundoqo reactor ebhedini esisigxina: (1). Ngempumelelo ukusombulula ingxaki leyo umxholo ukungcola ioli ekrwada kakhulu kangangokuba deactivates kuvala ngokukhawuleza. (2). Kunokuba xiya ku ri kuvala kunye nokunciphisa iindleko yokusebenza kakhulu. (3). Isiphumo de-beseNkosini zokuphosa ayikwazi kuphela ukuphucula ireyithi sesivuno ipetroli nedizili ukukhanya eliphezulu wongezelela-ixabiso, nayo ukuphucula umgangatho oyile ngempumelelo. 4. Iseti epheleleyo inkqubo neyanamhlanje ilawulwa ngokuzenzekelayo yi PLC (ulawulo logic ofakwe) inkqubo, ikwazile ukuyilawula ngokuzenzekelayo amanqaku reference kwaye imisebenzi ezininzi, ezifana, ukuqokelelwa kwedatha, ukubala, ingxelo, iifomu ingxelo ushicilelo, alarm njalo njalo.
Industrial eqhubekayo, ezigqibelele omkhulu, ukuphucula impumelelo unyango kunye amandla nemveliso. Exclusive ephantsi technology lobushushu pyrolysis, ukuselwa ephantsi, ukuphucula isivuno oyile kunye nomgangatho, ukuqinisekisa lwexesha elide, eliqhubayo ngokuthe nokusetyenziswa kwemveliso, kakhulu ukwandisa izixhobo * sempilo. Exclusive anti-cocking, thermal technology ukwabiwa, kwenza izinto eshushu ngokulinganayo kunye? Pyrolized ngokupheleleyo, ukuba kuphunyezwa imveliso ekumgangatho ophezulu. Kuphela technology uphawu eshushu, ukuqinisekisa ukusebenza okukhuselekileyo kwaye ithembekile. zokuhlanjululwa igesi Exclusive nokuhlala nobushushu ukusetyenziswa ri ubugcisa, irhasi nyulu ingasetyenziselwa kwinkqubo ukufudumeza njengoko igesi, ubushushu eseleyo ukuba dully kusetyenziswa, waqonda self-unikezelo pyrolysis reaction ngaphandle extra zokufudumeza umthombo, kakhulu ukunciphisa iindleko aphilileyo. igesi exhaust of line imveliso wavavanywa, ukukhutshwa yonke parameter ukuhlangabezana imfuneko EU EEA of EU kunye US EPA. umgca Abakhi amkele PLC ulawulo ekrelekrele, isilumkiso, alarm kunye umsebenzi auto-ukulungiswa, inshorensi ukusebenza phantsi imeko ukhuseleko. imfuneko ephantsi kwawo, ngamandla yokusebenza ephantsi kwimveliso ecocekileyo.
Previous: Inkunkuma zeplastiki pyrolysis izityalo Best High-Quanlity Products
Next: Scrap Continuous izixhobo iTire Pyrolysis Industrial
A: I-oyile iinkcukacha esiveliswa line yethu gqolo imveliso pyrolysis elo liyayithobela na SH / T0356-1996 No 4 Light Indawo yokuGcoba evulwa ebusuku. I oyile okuveliswayo ixabiso ubushushu eliphezulu kwaye sulphur phantsi, aza kusetyenziswa eluvundwini, generator neoli ekrwada ukuba neyanamhlanje njl ioli emva Inkqubo neyanamhlanje kufuneka izicelo big amandla nesezantsi isantya diesel, ubunjineli kunye nezithuthi zezolimo / zaselwandle zenjneli zonke iintlobo umbane. Kuba isicelo of Carbon Black, nceda uqhagamshelane nathi ukufumana iinkcukacha ezingaphezulu
izixhobo Oil zokuhlanjululwa
Continuous Oil lendle Pyrolysis Izixhobo
Continuous Scrap yaseTire Pyrolysis Production Line
Industrial Continuous Scrap iTire Pyrolysis Machine
Oli lokulungisa yeziTyalo
Oil lendle Recycling Machine
Oil lendle ngokonga Treatment Equipment
Pyrolysis Plastic To-Oli
amacangci iTire Pyrolysis yeziTyalo
ITire Recycling Line
iTire noKwenziwa ngokutsha kwezinto ebesezisetyenzisiwe
YaseTire amafutha Plant
ITire To Oil
lweNkunkuma Plastic Pyrolysis Production Line
Waste Plastic ngokonga Treatment Equipment
Waste Plastic amafutha Izixhobo
Plastic lweNkunkuma amafutha yeziTyalo
Plastic lweNkunkuma To Oil Equipment
Waste ngerabha Pyrolysis Equipment
Waste iTire Recycling Equipment
ithekhnoloji Continuous Waste iTire Pyrolys ...